उनले पेस्तोल तेर्छ्याउदै भने, ‘तेरो अन्तिम इच्छा के छ भन ?’-NepalKanoon.com
उनले पेस्तोल तेर्छ्याउदै भने, ‘तेरो अन्तिम इच्छा के छ भन ?’
बलराम समाल !! फोटो टंक र्कीको फेसबुक वालवाट
प्रकृतिले वनाएको सुन्दर कोपिलामा अप्रकृतिक तत्वले विषदी हालेत फूल कसरि फक्रियोस कसरि फुलोस । कोपिलामै झल्किएको सुन्दरता कोपिलामा नै निमोठियो त के थाहा सुगन्ध फूल को कति हुने थियो कस्तो हुने थियो ।
कोपिलामै चुडिएका फूलको इतिहाँस भन्दा पनि उपन्यास नै हुन्छ रे इतिहाँस त जित्नेको न हो जिन्दगिको उचाई नलिदै हारेको जिन्दगी कतावाट सकोस समाजलाई योगदान दिन कतावाट वनोस इतिहाँस, केवल उपन्यास वन्ने लगभग अवस्था ।
इतिहाँसका योद्धा धेरैले सम्झिएका विश्वास गरेका निडर, शाहासि र विद्धान नेता बलराम समाल राम्रो इतिहाँस लेख्ने हैसियतमा देखिएका नेताको क्रुर दमन र यातनाको कारण वन्नलागेको उपन्यासको विलौना हुन माथिका हरफ ।
देखेर उसको चित्र मन् सारै अमिलो भयो ।
बिर्सिएउं इतिहास आज धुलोमा पुरियो गयो ।।
सम्झन्छु छत्तिस सालमा यो मान्छे जोशिलो कति ।
उचाल्थ्यो हज्जारौं मान्छे मोहनी लाउथ्यो अति ।।
सम्झन्छु एक दिन उसले सम्बोधन गरदै थियो ।
एक्कासि काठ मांडूमा दर्के झरी सुरु भयो ।।
के जादु लगायो कुन्नि मान्छे सब जहाँ को तहीं ।
लछप्पै भिजेर तालि मान्छेले ठोके को ठोकेइ।।
दरबार तिर तेर्स्याई चोरी औंला उ गर्जियो ।
तन्काइ निर्धक्क छाती मान्छे हाम्रो उ गर्जियो ।।
मदनको बाजे थ्यो बाबै दृष्टिकोण थियो सफा ।
पदको गरेन माग दृष्टिकोण अति सफा ।।
पिटाइ चुटाइ खायो विद्युतीय करेन्ट पनि ।
बि यल पढेको मान्छे आज यो हालत छ नि ।।
मगर जातिको सन्तान चुचेको हेलामा पर्यो ?
भो तेसो नभनम क्यारे गरिबको छोरो जो पर्यो।।
मानसिक रोग त्यो जाबो केइ होइन उपचार गरे ।
ओझेलमा परेर मान्छे हेर त जिउंदै मरे ।।
दौंतरी बलराम तिम्रा दश नंग्री खियाउँदै ।
हेर्लान कि यो तिम्रो चित्र आफ्नो आत्मा चियाउँदै ।।
तिमि जस्तै असरल्ल तपस्या हाम्रो नि भयो ।
रगत र पसिना हाम्रो खै कसको सम्पति भयो ?
सम्झदै सुर्यप्रसाद शर्मा
‘०३७ सालको कुरो हो जस्तो लाग्छ । उ बेला पोखरामा नमिता र सुमिताको बलात्कार पछि हत्या भएको थियो । दरबारका नातेदारहरु आरोपित थिए । हामीले बिरोधको कार्यक्रम गर्यौं । त्रिचन्द्रमा आम सभा भयो । त्यस आमसभामा बलराम समाल र अच्युत गौतमले पनि बोलेका थिए । लगत्तै उनीहरुहरुलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो । अच्युतालाई चौकी सार गर्दै हिडाएर पोखरा लग्यो । समालालाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा हिरासतमा राख्यो । रत्न शमशेर राणा (कुनै माथिल्लो) पुलिस अफिसर थिए । समालालाई क्लबको छतमा लगेर उनले पेस्तोल तेर्छ्याउदै भने, ‘तेरो अन्तिम इच्छा के छ भन ?’ समालले हास्दै भने, ‘मलाई गोली ठोके पछि मेरा साथीहरुलाई भने खबर गरिदिनु होला ।’ उनले आफ्नो पेस्तोल होलेस्टरमा राखे र सलाम ठोके । यस्तो थियो मेरो साथि । टंक कार्की
समाल नेपाल ल क्याम्पसका पहिलो स्ववियु सभापति हुन । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका बहुचर्चित नेता उनी हाल मानसिक रोगले ग्रस्त भएरआफ्नो गृह जिल्ला महोत्तरीको रामनगरस्थित आफ्नै निवासमा लामो समयदेखि विक्षप्त पिडामा छन् ।
उनको यो फोटो देखेपछि उनको उपचार गराउनका लागि उनका सकमकालीनदेखि हालका युवापुस्तासम्म जुर्मुराएका छन् । २०६२ सालका ल कलेजका उपभासपति टीकाध्वज खड्काले उहाँ गाउमानै रहेको वताउदै, २०३६ सालमा उहाँलाई इलेक्ट्रिक शक दिइएका कारण उहाँअहिले मानिसक रुपमा बिरामी हुनुहुन्छ । यही भदौ २५ गते समालको गाउँमा युवराज संग्रौला, टंक कार्की लगायत एक चिकित्सकलाई लिएर त्यसतर्फ जान लागेको पनि उनले बताए ।
नेपाल ल क्याम्पसमा आज समालले भाषण गर्दै रे भनेपछि काठमाण्डौका अधिकंस क्याम्पस पुरै रित्तै हुन्थे, पाँचायती निरंकुसताको र मण्डले भनाउदाहरुको जगजगीको विचमा स्वतन्त्रतार र न्यायकोलागि कुनै परिस्थितीमा पछि नहट्ने उनको शाहासको कुनै संग तुलना हुदैन । उनि मगरका छोरा हुन तर अंग्रेजी, संस्कृति लगायतका धेरै भाषाहरुमा पोख्त थिउ’ आफूले सुनेको कुरा खड्काले नेपालकानूनलाई बताए ।
अहिले उनका सहकर्मी एवं ल कलेजका पूर्व सभापतिहरुको पहलमा उनलाई काठमाण्डौं ल्याउने तयारी भइरहेकोछ । उनको बारेमा थाहा पाएपछि :
समालको वारेमा युवराज संग्रौला भन्छन : समाल र म त्यतिबेला सँगै पढ्थ्यौं । विद्यार्थी आन्दोलनमा हामी सँगै जेल पनि गएका थियौं । ऊ मभन्दा एक ब्याच अगाडि थिए । त्यतिबेला पहिलो पटक नेपाल ल क्याम्पसको स्ववियू सभापति पनि भएका थिए र उनले अत्यधिक भोट पाएका थिए ।
सायद उसले जति धेरै भोट पहिला कसैले पाएको थिएन । असल साथी, राम्रो नेता थियो ऊ । २०३६ सालमा पटक पटक जेल पर्दा पाएको यातनाहरुले गर्दा उसको त्यतिबेला नै मानसिक असर परेको लक्षणहरु बेला बेलामा देखिन्थ्यो । त्यही कारणले होला उसले पढाईलाई पनि निरन्तरता दिएन, अहिलेको जस्तो हात हातमा फोन या सामाजिक संजालको सुविधा थिएन त्यतिबेला र मेरो पनि उसँग सम्पर्क टुट्यो ।
समालकै सम्झनामा हिक्मत कार्की : उहाँ हाम्रो अग्रज वकिल एवम् नेता हुनुहुन्छ । २०३६ सालमा नेपाल ल क्याम्पसमा अनेरास्ववियूका तर्फबाट सभापतिमा चुनाव जित्नुभएको थियो । पछि २०३७ सालमा नमिता सुनिता हत्याकाण्डको बिरोधमा अनेरास्ववियूले गरेको कार्यक्रममा उहाँ गिरफ्तार हुनुभयो । त्यो समयमा उहाँलाई दिएको यातनाले गर्दा उहाँको मानसिक अवस्थामा खलल पुग्न गयो । त्यतिबेला देखि नै उहाँ उपचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि उहाँको ल फर्म चलेन ।
पछि महोत्तरीमा नै गएर उहाँले पार्टीकै काम गर्न थाल्नुभयो । उहाँ अहिले मानसिक रुपमा बिरामी हुुनुहुन्छ, किनभने उहाँको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर र परिवारले पनि उपचार गर्न सकिरहेको छैन ।
त्यसैले उहाँलाई हामीले उहाँको उपचार होस् र बाँकी जीवन सहज तरिकाले बितोस् भनेर तीन चार वटा समूह लागि परेको छ जसमा नेपाल ल क्याम्पसका स्ववियूका पूर्व सभापतिहरु, उहाँलाई चिन्ने एमालेका नेता कार्यकर्ताहरु, महोत्तरी/जनकपुर लगायतका क्षेत्रका नेता कार्यकर्ताहरु र उहाँका समकालीनहरु मिलेर कोष जम्मा गर्ने र औपचारिक रुपमा नै दुई÷तीन दिनभित्र काम गर्ने तयारी भइरहेकोछ ।
समालको वारेमा नेपाल ल क्याम्पसका पुर्व स्ववियु सभापति चन्द्र शाही भन्नुहुन्छः म २०६० सालको नेपाल ल क्याम्पसको सभापति हुँ । मैले उहाँको बारेमा सुनेको थिएँ उहाँका समकालीनहरुबाट । कसैको बारेमा बोल्न नडराउने एकदमै निर्भिक वक्ता हुुनुहुन्थ्यो रे उहाँ । २०३६ को सेरोफेरोमा कतै भाषण या आन्दोलन गर्नुप¥यो भने वक्ता नै बलराम समाल हुनुहुन्थ्यो रे ।
मानिसहरु पनि बलराम समालले भाषण गर्दैछ भनेपछि आउने नत्र नआउने त्यस्तो माहोल उहाँले बनाउनुभएको थियो भन्ने मैले सुनेकोछु । उहाँ अहिले बिरामी हुनुहुन्छ । उहाँलाई हामीले २०५८ सालतिर नै उहाँको विषयमा कुरा उठेको थियो र २०६२/६३ देखि नै उहाँलाई केही न केही रुपमा सहयोग गरिरहेका छौं ।
उहाँका छोराछोरीलाई पनि त्यही सहयोग अनुरुप राजधानीमा अध्ययनको वातावरण बनाइएकोछ । उहाँको उपचारको लागि भने पूर्व सभापतिहरुको समूह मिलेर यही २५ गतेदेखि सक्रिय रुपमा सहयोग गर्ने कुरा भएको यभियानता मद्धेका एकले नेपाल कानूनलाइै वताए ।